भिनामसिनामै अल्झिए मुख्यमन्त्री
असोज ४, २०७६
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि खडा नयाँ संचना प्रदेशको जग बसाउने मुख्य अभिभारा हालका मुख्यमन्त्रीहरुलाई छ ।
सँगै समृद्धिको जनआकांक्षा पनि छ तर प्रदेश सरकार हाँक्ने मुख्यमन्त्रीहरु यस्ता महत्वपूर्ण दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै सामान्य औपचारिक कार्यक्रममा समय खेर फालिरहेका छन् ।
बच्चाको भातखुवाइसम्ममा उनीहरुको उपस्थिति देखिन्छ । अर्कातिर प्रदेश सरकार गठन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा आवश्यक कानुन बनिसकेका छैनन्, बनेका कतिपय कानुन पनि सरकारले नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर छ । केन्द्र सरकारले अधिकार प्रत्यायोजनमा कन्जुस्याइँ गरिरहेको प्रदेश सरकारहरुले गुनासो गरिरहेका छन् तर प्राप्त अधिकार उपयोगमा पनि उनीहरु चुकिरहेको प्रस्टै देखिन्छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छापिएकाे छ ।
हिउँ छिचोल्दै पहिलोपटक हिल्सा पुग्यो सशस्त्र प्रहरी
विश्वका यी नेता : जो छन् सरल जीवन, उच्च प्रतिष्ठाका धनी
अधिकांश संक्रमितमा लक्षण छैन
राष्ट्रपति कार्यालयमा एक करोडको गलैँचा फेरिँदै
कानून संशोधन गरेर जनप्रतिनिधिलाई ‘मासिक पारिश्रमिक’को सट्टा अन्य १० थरी सुविधा !
विदेशमा अलपत्र नागरिक ल्याउने तयारीबारे संसद्मा अर्थमन्त्रीले दिए जानकारी
अर्थमन्त्रीलाई सांसद्को प्रतिपश्न– कोही धनाड्यले सरकार सञ्चालन गर्छु भन्यो भने पनि दिने ?
रुसले कोरोनाभाइरस रोगीलाई एन्टीभाइरल औषधि दिने, परीक्षण सफल भएको दाबी
विवादित एमसीसी बजेटमा किन घुस्यो ? अर्थमन्त्री खतिवडाले संसद्‍मा दिए जवाफ
सगुन कम्पनीमा लगानीको अबसर : कम्तीमा ९ सय डलरको शेयर किन्न सकिने
बाँके दुर्घटनाका घाइतेको दाबी : चालकले रक्सी पिएर गाडी ‘फुल स्पीड’ चलाए
दोक्लम विवादपछि चीनले बनाएको अत्याधुनिक हतियारका कारण भारत चिन्तित
बाँकेमा सवारी दुर्घटना : घाइते २१ जनाको परिचय खुल्यो, ४ जनाको अवस्था गम्भीर